करिब एक बर्ष अघिको त्यो घटनाले लिएको रहेछ अहिले ६ जनाको ज्यान , के थियो त्यो घटना? यस्तो सम्म पो भएको रहेछ ! – Classic Khabar
संखुवासभाको उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको सामूहिक ह ‘त्याका आरोपी लोकहादुर काकीले पीडितमध्ये एकमाथि ह ‘त्याको आशंका एक वर्ष अघि देखि गरेको खुलेको छ । प्रहरीसँगको बयानमा लोकबहादुरले काका पर्ने तेजबहादुरले एक वर्ष अघि आफ्नी आमाको ह त्या ग ‘रेको आशंका गरेको बयान मार्फत भनेका छन् ।
Prevआफ्नै छोराले मृत आमाको शब एक वर्षदेखि लुकाएर राखे, कारण थाहा पाउदा प्रहरी पनि परे चकित !
Nextतेजबहादुरलाई मा र्न खोजेको थिएँ, प्रमाण मेटाउन देख्नेजति सबैलाई सिध्याएँ
यि चितवनकी सरकारी जागिरे शारदाले, एकैचोटि कति जनासँग बिहे गर्न सकेकी नानी !